Alatsinainy, May 28, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tena mpankafy ahy aho Plaxo hatramin'ny nahitako azy voalohany. Mihazona ny boky adiresy an-tserasera sy ivelan'ny Internet amin'ny toerana am-polony eo ho eo aho, anisan'izany ny findaiko. Ho fanampin'izany manana kaonty LinkedIn aho. Mampatahotra ny fitazonana ny lohalaharana amin'izy ireo… raha tsy noho i Plaxo.
Alao an-tsaina ange raha toa ka nitandrina ny mombamomba ny adiresy tao amin'ny bokin'ny adiresy ny olona rehetra fantatrao ka tsy tokony nokasihinao mihitsy… Plaxo izany! 'Misoratra anarana' amin'ny asan'ny olona ifandraisanao na ny mombamomba anao ao amin'ny Plaxo ianao ary isaky ny mampifangaro ny bokin'ny adiresinao ianao dia i Plaxo no mikarakara ny ambiny. Misy mihitsy aza de-duper tena manam-pahaizana izay manambatra vaovao avy amin'ny karatra 2 na mihoatra ary mamela anao hijery ny merge sy mankato azy.
Niditra tao amin'ny Plaxo aho androany tolakandro ary nahagaga ahy tampoka - tamin'ny alàlan'ny fidirana an-tsehatra dia fanasana ho an'ny Plaxo Preview. Rehefa tsindrio io dia nalaina tao amin'ny pejin-tranonkala Plaxo vaovao mahafinaritra aho - ao anatin'izany ny boky adiresy, kalandrie, ny loharano fampidirako rehetra ary koa ireo singa vaovao, toy ny fikirakirana Instant Messaging miorina amin'ny tranokala avy any Meebo, ecards, task, note, toetr'andro, sarintanin'i Yahoo! ary na dia Tsindrio hiantso Voice over IP avy amin'i Jajah!
Ho an'izay rehetra manao tamba-jotra tahaka ahy dia tsy maintsy ananana io fitaovana io! Azoko atao ny miditra amin'ny alàlan'ny browser-mobile miaraka amina interface interface mahia izay haingana sy mora ampiasaina.
May 28, 2007 ao amin'ny 8: 41 PM
Yep! Tiako fotsiny 🙂
May 29, 2007 amin'ny 4: 39 AM
Mampiasa ny serivisy premium ve ianao? Ny sasany amin'ireo fiasa premium tafiditra ao toy ny 'contact de-duper' dia zavatra izay tokony ho ao anaty serivisy mahazatra, saingy azoko tsara ny raharaha momba ny raharaham-barotra tsy antony. Fa tiako ny hevitra hiaraka amin'ny mombamomba ahy LinkedIn.
Ary ny fidirana amin'ny finday dia mety ho tombony lehibe ihany koa, na dia efa nampiasa iSync tamin'ny Mac aza aho hampifanindriana ny boky adiresy amin'ny N95-ko. Fa hanamora ny zavatra hananana azy rehetra avy amin'ny loharano iray.
May 29, 2007 amin'ny 7: 52 AM
Eny, mandoa ny serivisy premium aho. Ny fampifangaroana vaovao dia hiara-miasa amin'ny boky Mac Address sy iCal! Ilaina ny de-duper, ekeko.
May 29, 2007 amin'ny 11: 47 AM
Okay Doug, nisotro ny Kool-aid aho ary nisintona ny fitaovana ho an'ny Outlook. Azoko antoka fa io no notadiaviko. Sweet!
May 29, 2007 ao amin'ny 7: 43 PM
Tsy ho diso fanantenana ianao, Tony! Tsy nampivily lalana anao tamin'ny fampiantranoana aho, sa tsy izany? 🙂
May 30, 2007 amin'ny 11: 06 AM
Tongasoa ianao, Doug.
Jun 14, 2007 ao amin'ny 9: 39 PM
Tokony hijery ianao spock.com. Nafindrako tany amin'ny fifandraisana rehetra ny plaxo spock.com. Fampiharana mangatsiaka tanteraka izany. Io no tokony ho plaxo.
Jun 14, 2007 ao amin'ny 10: 38 PM
Nangataka fanasana ho any Spock aho, saingy tsy hitako ny fomba ahafahany mandresy an'i Plaxo! Homeko tadio izy io na izany aza!